“Wakiilka Vinicius waa uu na khiyaanay” – Barcelona – Gool FM
“Wakiilka Vinicius waa uu na khiyaanay” – Barcelona
Ahmed Nur April 12, 2021
(Barcelona) 12 Abriil 2021. Mid ka mid ah madaxdii hore ee Barcelona ayaa shaaciyay in wakiillada laacibka Real Madrid ee Vinicius Jr ay khiyaano kula kaceen Barca ka hor inta uusan xiddigan u dhaqaaqin Santiago Bernbeu.
André Cury oo ahaa madaxii indha-indheynta Barca ee qaybta Koonfurta Ameerika ayaa sheegay inay saddex sano iyo bar kahor xilliga Los Blancos ay la saxiixatay Vini inay iyagu wada xaajood la bilaabeen.
Cury oo Barcelona u qaabilsanaa dhanka dalka Barzil ayaa horraan ka shaqeeyay saxiixyadii ay Neymar Jr iyo Arthur Melo ugu soo dhaqaaqeen Camp Nou 2013 iyo 2018, waxaana uu sidoo kale isku dayay inuu Barca usoo gacan geliyo saxiixyada Vinicius iyo Rodrygo Goes.
“Saddex sano iyo bar ayaan Vinicius kaga horreynay Madrid, tani waxay ahayd arrin kale, wakiilladiisa Frederico Penna iyo Stefano Hawilla oo heshiis Barcelona la gaaray ayaa na khiyaannay” ayuu Cury u sheegay majaladda SPORT.
Masuulka shaqada Barca faarujiyay sanadkii hore ayaa waxa uu intaas ku daray in laacibka reer Brazil uu taageere weyn u ahaa Blaugrana sidoo kalen uu jeclaa Neymar, hase ahaatee, wakiilladiisa ay ka shaqeeyeen in xiddigan uu caga dhigto caasimadda Spain.
“Wakiillada waxay imaadeen Barcelona, heshiiska ayaa la isku raacay, gacmaha ayaana la is geliyay… balse, mar qura ayaa la waaya, wayna na khiyaameyn” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Dhanka kale, madaxii hore ee kormeerka Barcelona ayaa sheegay in kooxda Camp Nou ku ciyaarta ay ka gaabisay lasoo saxiixashada Rodrygo, sidaas darteedna Real Madrid ay ka faa’ideysatay soo xero gelinta laacibka garabka ka ciyaara.
Waxa uu intaas ku daray in aabbaha dhalay Rodrygo uu si shaqsi ah ula soo xiriiray, una sheegay inuu wiilkiisa doonayay ku biirista Bara, hase ahaatee, Barca ayaanan qaadan taladii Cury oo ahayd inay dardar geliyaan saxiixa laacibka reer Brazil sida uu isagu sheegay.
Sababta ay ugu careysan tahay Dortmund, ujeeddada ka dambeysa diidista Haaland & Man United oo arkootay baddelka 20-jirka reer Norway
Real Madrid iyo PSG oo qayb ka ah saddex naadi oo isku haya saxiixa Jesse Lingard